1 YOOKUMKANI 7 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
1 YOOKUMKANI 71 YOOKUMKA ... 7
71Kambe ke uSolomon wathatha iminyaka elishumi elinesithathu xa wayesakha ibhotwe lakhe. 2Ibhotwe lalibizwa ngokuba lihlathi laseLebhanon. Laliziimitha ezingamashumi amane anesine ubude balo, liziimitha ezingamashumi amabini anambini ububanzi, ukuphakama kuziimitha ezilishumi elinesithathu elinesiqingatha. Lalinezintlu ezine zeentsika zomsedare, zintsika ezo ezazixhasa imiqadi yomsedare. 3Uphahla lwayo lwalwenziwe ngomsedare obekwe phezu kwemiqadi eyayixhaswa ziintsika. Imiqadi le yayingamashumi amane anantlanu, ilishumi elinesihlanu kuluhlu ngalunye. 4Kwakukho izintlu ezintathu zeefestile eziphakamileyo zijongene. 5Imigubasi yeengcango yayenziwe buxande, iminyango le izizintlu ezintathu ezijongeneyo.
6Igumbi elilandelayo laliziimitha ezingamashumi amabini anesibini ubude, luziimitha ezilishumi elinesithathu nesiqingatha ububanzi. Ekungeneni kulo kwakukho igunjana elilisango elineentsika nevaranda.
7Igumbi elilandelayo yayiligumbi lekumkani elalikwayinkundla yamatyala apho uSolomon wayewavavanyela khona. Iindonga zazambathiswe ngamaplanga omsedare ukusukela emgangathweni kuye kuthi gaa ngesilingi. 8Ibhotwe lakhe apho wayehlala khona uSolomon, elalakhiwe kwiyadi esemva kwendlu yokuxoxwa kwamatyala, lalakhiwe ngokufanayo nezinye izindlu esezichaziwe. Kananjalo uSolomon wakha ibhotwe eliyelele kwelakhe, elakhela umkakhe intombi yokumkani waseJiputa.Okanye “intombi kaFaro” igama ababebizwa ngalo ookumkani kwelaseJiputa – 1 Kum 3:1
9Zonke ezi zakhiwo, kunye neyadikazi enkulu, zazakhiwe ngawona matye odidi oluphambili ukusuka kwiziseko zazo kuye kuthi xhaxhe ekudibaneni nophahla. La matye ayelungiselwa apho ayembiwa khona ukuze angene athi ngci ezindaweni zawo. Ayecokiswa ngeesarha ukuze afaneleke ngaphandle nangaphakathi. 10Isiseko sasisesamatye amakhulu odidi, amanye kuwo eziimitha ezintathu ezinesiqingatha ubude, amanye ke eziimitha ezine. 11Bekusakhiwa ngamanye amatye phezu kwawo aqingqwe alungelelaniswa kunye nemiqadi yomsedare. 12Iindonga zeyadi yebhotwe, kwanezeyadi ephakathi yendlu *kaNdikhoyo, kwanegunjana elilisango lendlu kaNdikhoyo, zazakhiwe ngemiqolo emithathu yamatye aqingqiweyo elandelwa ngumqolo omnye weplanga lomsedare, njalo ke ukunyuka.
13Ukumkani uSolomon wathumela eTire ukuba kuyiwe kuthathwa uHuram,Okanye “uHiram” nakwivesi yama-40 neyama-45 14onina wayengumhlolokazi wendlu kaNafetali, uyise engumTire. Lo mfo wayeyingcibi yezobhedu, elichule elinamava kuzo zonke izinto ezenziwa ngobhedu. Weza ke kukumkani uSolomon, wawenza wonke umsebenzi awunikiweyo.
(2 Gan 3:15-17)
15Ke kaloku uHuram lo wabumba iintsika zobhedu ezimbini, inye iziimitha ezisibhozo ukuphakama, iziimitha ezintlanu nesiqingatha jikelele. 16Ezi ntsika wazenzela iintloko ezingqukuva ngobhedu; nganye kuzo yayiziimitha ezimbini ezinekota ukuphakama. 17Intloko yentsika nganye wayihombisa ngamatyathanga asixhenxe alukiweyo. 18Wazenza ngolo hlobo ke iintsika, waza kwicala langentla kula matyathanga alukiweyo wafakelela imiqolo emibini yeerharnati zobhedu ezisixhenxe. 19Ezi ntloko zingqukuva zezi ntsika zazimile okweenyibiba, ukuphakama zinganeno kweemitha ezimbini. 20Phezu kwezi ntloko zezi ntsika zimbini ngentla kwalaa ndawo ibusitya malunga naloo mnxeba wetyathanga kwakukho amakhulu amabini eerharnati ziyimikrozo jikelele. 21Ezi ntsika ke wazimilisela phambi komnyango wendlu kaThixo. Le ingasekhohlo wathi nguJakin, waza engasekunene wathi nguBhowazi.Oko ngathi kukuthi “nguZinzisayo noMandlakuye” 22Iintloko zazo zazimilise okweenyibiba. Waba ke njalo uyagqitywa umsebenzi weentsika.
(2 Gan 4:2-5)
23Kananjalo wenza ichibi ngobhedu. Lalingqukuva, liziimitha ezimbini ezinekota ubunzulu, ububanzi buziimitha ezine ezinesiqingatha, laza ke laziimitha ezilishumi elinekota ukujikeleza. 24Ngaphantsi komphetho walo jikelele kwakukho amathangazana. La mathangazana ayeyimiqolo emibini, eyinto enye nechibi elo.
25Eli chibi lalimi phezu kweenkunzi zeenkomo ezilishumi elinesibini ezenziwe ngobhedu, ezintathu zikhangele ngasentla, ezintathu zijonge ngasentshona, esintathu zikhangele ngasezantsi, zaza kananjalo ezintathu zajonga ngasempuma. Ichibi lalithe ngxishi phezu kwazo, izinqe zazo zijonge embindini walo. 26Ububanzi balo babulingana nesandla, umphetho walo ufana nekomityi, kanye oku kwenyibiba edubuleyo. Lalingena iilitha ezingamawaka angamashumi amane.
27Kananjalo uHuram wenza neshumi leenqwelo zobhedu, nganye kuzo iyimitha eneekota ezintathu ubude, bukwangako nobubanzi, ukuphakama kuyimitha enekota. 28Ezi nqwelo zazenziwe ngolu hlobo: zazinamanqwanqwa anxityelelaniswe nezibonda. 29Kuloo manqwanqwa phakathi kwezibonda kwakukho iingonyama, iinkunzi zeenkomo, *nezithunywa ezimaphiko. Ngaphezulu nangaphantsi kweengonyama nezo nkunzi zeenkomo kwakujinga izidanga ezixonxiweyo. 30Inqwelo nganye yayinamavili amane obhedu, ikwaneasi yobhedu. Kwakukho isitya esixhaswe ngezibonda ezine. Ezo zibonda zazihonjiswe ngezidanga macala. 31Ngaphezu kwesitya kwakukho indawo ekhamisileyo ingqukuva. Ngaphezu kwenqwelo yayivele isithuba seesentimitha ezimashumi mane anesihlanu, iziisentimitha ezilishumi elinesibhozo ukuhla. Yayikroliwe jikelele. Amanqwanqwa la wona ayengoono-ne abalinganayo, engekho ngqukuva. 32La mavili mane ayephantsi kwaloo manqwanqwa, iiasi zamavili zinxibelelene nenqwelo. Ukuphakama kwevili ngalinye kwakuziisentimitha ezingamashumi amathandathu anesithandathu. 33Amavili la ayefana neenqwelo zonke; iasi, umphetho, izibonda zazo, ngokunjalo neenafu, zonke zazizezobhedu.
34Inqwelo nganye yayinezibonda ezine ezinxityelelwe apha ezikoneni emazantsi. 35Inqwelo nganye yayibotshwe ngebhanti engqukuva apha emantla, ke yona iziisentimitha ezingamashumi amabini anambini jikelele. Izibonda ezaziyixhasile, ndawonye namacala, zazinxityelelaniswe nenqwelo ngobubanzi. 36Kananjalo wakrola *izithunywa ezimaphiko, iingonyama, nemithi yesundu apho kwezo zibonda, nakuloo macala, naphi na apho kwakukho isithuba, kujikeleziswe nezidanga. 37Zazinjalo ke ezo nqwelo zilishumi. Zazibunjwe ngandlela-nye, ngazinye zifana zilingana.
38UHuram wenza izitya ezilishumi, esenzela ezo nqwelo zolishumi. Isitya ngasinye sasiyimitha eneekota ezintathu ububanzi, singena iilitha ezimakhulu asibhozo.Mfud 30:17-21 39Isihlanu sezo nqwelo wasibeka ngasekunene kwendlu kaThixo, esinye isihlanu sezo nqwelo wasibeka ngasekhohlo kwayo. Ke lona ichibi walibeka ngasekunene kwikona ekumazantsi-mpuma.
Impahla yendlu kaThixo
(2 Gan 4:11 – 5:1)
40Kananjalo uHuram wenza neembiza, iifotsholo, nezitya zokufefa.
Ngoko ke uHuram wawugqiba umsebenzi awayewenzela ukumkani uSolomon endlwini *kaNdikhoyo.
iintloko ezimbini ezibusitya zezo ntsika;
amatyathanga alukiweyo amabini ahombise ezo ntloko zimbini zibusitya zezo ntsika;
42iirharnati ezimakhulu mane ziyimiqolo emibini ethe nca kwityathanga ngalinye elilukiweyo elihombisa ezo ntloko zibusitya zeentsika ezo;
43izixhaso ezilishumi zinezitya zazo ezilishumi;
44ichibi lobhedu lineenkunzi zeenkomo ezilishumi elinambini ezenziwe ngobhedu ezilixhasayo;
45iimbiza, iifotsholo, nezitya zokufefa.
Zonke ke ezo zixhobo zazenziwe nguHuram ezenzela ukumkani uSolomon ukuze zisetyenziswe endlwini kaNdikhoyo zazenziwe ngobhedu olugudisiweyo. 46Ezo zinto ukumkani wathi mazibunjwe ngezibumbi zomdongwe kwintili yeJordan phakathi kweSukoti neZaretan. 47USolomon zange abulinganise ubunzima bezi zinto, kuba kaloku zazininzi gqitha. Ngoko ke ubunzima bobhedu zange bulinganiswe.
48Kananjalo uSolomon wazenza zonke iimpahla zendlu kaNdikhoyo:
iqonga lamadini legolide;Mfud 30:1-3
itafile yegolide eyayihlala isonka esinikelwa kuThixo;Mfud 25:23-30
49iziphatho-zibaneMfud 25:31-40 ezenziwe ngegolide (ezihlanu ngasekunene, ezihlanu ngasekhohlo, zimi phambi kwegumbi eliyingcwele kangcwele);
iintyatyambo, izibane, nezitya zokugcina imitya yezibane;
50izitya zegolide, izikhwezeli-zibane, izitya zokufefa, izitya zesiqhumiso, neepani zamalahle;
iihinjisi zegolide zegumbi eliyingcwele kangcwele, nezo zeengcango zegumbi elingaphandle.
51Uthe ke wakufezeka loo msebenzi uSolomon awayewenzela indlu kaNdikhoyo, wazithatha zonke ezo zinto zazinikezelwe nguyise uDavide2 Sam 8:11; 1 Gan 18:11 – isiliva, igolide, nezinye izinto zokusebenza – waza ke wazifaka koovimba bendlu kaNdikhoyo.